နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ ချောင်းဆိုးရင်​ကျပ်​ ဖြစ်​​နေတာရက်​၂၀​ကျော်​​နေပြီ ဖြစ်​ခါစတပါတ်​​လောက်​အထိ နေ့တိုင်း ဆေးခန်းသွားပြတယ် – MMPost
​နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ ချောင်းဆိုးရင်​ကျပ်​ ဖြစ်​​နေတာရက်​၂၀​ကျော်​​နေပြီ ဖြစ်​ခါစတပါတ်​​လောက်​အထိ နေ့တိုင်း ဆေးခန်းသွားပြတယ်
ကျန်းမာ​ရေး March 13, 2018
​နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ ချောင်းဆိုးရင်​ကျပ်​ ဖြစ်​​နေတာရက်​၂၀​ကျော်​​နေပြီ ဖြစ်​ခါစ တပါတ်​​လောက်​အထိ နေ့တိုင်း ဆေးခန်းသွားပြတယ်​။
အိမ်​ကို.ရွာကဦး​လေးအလည်​​ရောက်​တာနဲ့ ကြုံ​ရောဦး​လေးက.​နေဦး ​ဆေးရုံမသွား​သေးနဲ့ဦး သ​ဘောင်္ရွက်​​ရေ​နွေးစိမ်​​သောက်​ကြည့်​စမ်း ဆိုတာနဲ့ အာ့​နေ့ တ​နေ့လုးံဝင်​သ​လောက်​
သ​ဘောင်္ရွက်​ ကို​ ရေ​နွေးစိမ်​​သောက်​တာ ညကျ ​အိပ်​နိုင်​တယ်​ ဒါနဲ့​ရောဂါ သက်​သာတာပဲ ဆိုပြီး
​နောက်​ရက်​​တွေ ဆက်​တိုက်​​သောက်​​ပေးတာ ၅ရက်​​လောက်​​နေ​တော့ ​ချောင်းဆိုး ရင်​ကျပ်​ ​လေပြွန်​​ရောင်​တာ အရှင်း​ပျောက်​သွားတယ်။
သ​ဘောင်္ရွက်ကို အသုးံပြုပုံက. အရွက်​စိုကိုပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အရွက်​​ခြောက်​ကိုပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ခွက်​ထဲ ထည့်​ အ​ပေါ်က​နေ​ရေ​နွေးပူပူကို ​လောင်းထည့် မပူမ​အေး​လေးမှာ ​သောက်​လို့ရပီ ​သောက်​ခါစမှာ.အရွက်​စိမ်း​စော်​ နံ​နေ​ပေမဲ့ သုးံခွက်​​လောက်​ ​သောက်​ပြီးသွားရင်​အဆင်​​ပြေ​ပြေေ​သာက်​နိုင်​သွားပြီး…​ငွေမကုန်​ပဲ ​ရောဂါ သက်​သာ​စေတဲ့ ​ဆေးနည်းမို့. ကျမနဲ့ ရောဂါတူသူများရှိရင်​ စမ်း​သောက်​ကြည့်​​စေချင်​ပါတယ်​။
mmpost.biz မှ စီစဉ်တင်ဆက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ Website တွင် ဖော်ပြပါရှိသော သတင်းများ၊ သတင်းဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် Facebook စာမျက်နှာ ၊ Website များတွင်မဆို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
This is the code for your widget. Just copy and paste it into your website.
More From MMPost
မဖြစ်မနေအခြေအနေမဟုတ်ရင်အမျိုးသမီးများ အောက်ခံဘောင်းဘီမဝတ်ဆင်သင့်တော့ပါ မဖြစ်မနေအခြေအနေမဟုတ်ရင်အမျိုးသမီးများ အောက်ခံဘောင်းဘီမဝတ်ဆင်သင့်တော့ပါ မိန်းကလေးတွေ မလိုအပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အောက်ခံဘောင်းဘီကို မ၀တ်ကြပါနဲ့ အမျိုးသမီးများ အောက်ခံဘောင်းဘီမဝတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း အောက်ခံဘောင်းဘီကြောင့် သက်တောင့်သက်သာမရှိရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို အမျိုးသမီးတိုင်း ခံစားဖူးမှာပါ ။ ဒီလို အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေဟာ တကယ်ပဲ နေ့စဉ်ဝတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ ။ …
ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ် မီးလောင်ခြင်းမှာ အလ္လာရိုက်တာဖြစ်ကြောင်း မာလာလာပြောပြီ
အဆိပ်ထုတ်ထားတဲ့ အိမ်မွေး အလှမြွေလေးတွေ တရုတ်ပြည်မကြီးကတဆင့် ထပ်မံရောက်ရှိလာ
တပ်မတော်နဲ့ KNU တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံ တထောင်ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး
စနစ်တကျဖိနှိပ်မှုတွေရှိကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ဖို့ဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂစွပ်စွဲ
MMPost Copyright © 2018.